कोरोना भन्दा क्वारेन्टाइनको डर ! – Dullu Khabar
कोरोना भन्दा क्वारेन्टाइनको डर !
by नविन टमट्टा
२७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०६:०७
समग्र मानव जातीलाई चुनौती दिने गरि विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट सर्ने कोभिड–१९ को कारण विश्व थकित बनेको छ । यसले हाम्रो नेपालमात्र होइन कर्णाली प्रदेशलाई समेत बाँकी राखेन ।
चिनको वुहान प्रान्तबाट यात्रा सुरु गरेको यो भाइरसले सिङ्गो विश्व जगतलाई नै चपेटामा पारेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन रहेको छ । मृतक उनिहरु क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए ।
अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन बसाईको कारण संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । साेमबारसम्म कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ५७ जना कोरोना संक्रमित पुष्टी भएका छन् । भने देशभर ३ हजार ७ सय ६२ जना संक्रमित बनेका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सहित जम्मा १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
यस प्रदेशमा करिव २२ हजार भन्दा धेरै छिमेकी मुलुक भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । ती मध्ये १० हजार १ सय ४० जनाको मात्र पिसिआर परिक्षण गरिएको छ भने बाँकीको परिक्षण हुन सकेको छैन ।
कोरोना परिक्षणमा गरिएको ढिलाईको कारण पनि संक्रमितको संख्या सहजै बढ्दै गएको छ । स्वाव लिइएको १० दिनपछि रिपोर्ट आउछ भने उक्त संक्रमित व्यक्तिसँग त्यतिका दिनसम्म कति संक्रमित हुन्छन् होला ।
स्वाव दिनु अगाडि कोरोना संक्रमित छैन भने १० दिन पछि सम्म उ संक्रमित भईसकेको हुनसक्छ तर रिपोर्ट नेगेटिभ नै आउछ । किनकी उसको स्वाव संक्रमित हुनपूर्व लगिएको थियो ।
एकातर्फ परिक्षणमा भएको ढिलाई त छदै थियो भने यस्तो विषम् परिस्थितिमा पनि विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका नेपालिहरुको पीडा एकदमै दर्दनाक बनेको छ । यो महामारी नेपालिहरुको गरिखाने रोजिरोटि खोसिएको छ । नेपालमा कैयौं स्थानमा भित्रिएका मानिसहरूलाई उद्दार त ग¥यो तर उचित रुपमा उद्दार गर्न सकेन जसको कारण सन्त्रास फैलिएको छ ।
क्वारेन्टाइनको एउटै कोठामा करिव २/३ सय जनाको कोचिएर बसेका छन् । उनिहरुको खाने, बस्ने, सुत्ने, शौचालय सबै एउटै प्रयोग गर्छन् । यसोगर्दा कुनै एकजनामा भएको संक्रमण सजिलै सयौं जनामा पुग्ने निश्चय छ ।
एकातर्फ अरुमा भएको संक्रमण आफुमा फैलिन सक्ने त्रास त छदै छ भने अर्को तर्फ अरु कुनै रोगको संक्रमण हुनसक्ने त्रास पनि उत्तिकै छ ।
अव्यवस्थित खानपिनको कारण झाडापखाला लाग्ने डर, गर्मी र मच्छरको कारण डेंगुको डर, हिमाली भेगमा चिसोको कारण विरामी पर्न सक्ने डर त्यसैपनि छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको १० अर्व रकम खर्च भैसकेको समाचार बाहिरिएको छ । तर उचित ढङ्गले कार्यन्वन भएको देखिदैन ।
कोभिड–१९ अन्तर्गत बिनियोजित बजेटलाइ अनावश्यक खर्च नगरि सहि सदुपयोग गरेको भए हालसम्म कयौं नेपालीहरु कोरोनाको शिकार हुनबाट जोगिन सम्भव थियो ।